Vaovao - Inona avy no soa entin'ny mitaingina valifaty?
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fitaterana amin'ny valindrana fitaratra?
Fampiononana: FIAROVANA MATY!
Fiarovan-drivotra Fiarovan-drivotra dia afaka manampy amin'ny ady amin'ny havizanana, fanaintainan'ny lamosina, ary fihenan'ny sandry amin'ny fanesorana ny rivotra mitsoka amin'ny tavanao sy ny tratranao. Ny rivotra kely manosika ny vatanao dia miteraka fitsangatsanganana mahafinaritra sy mahafinaritra kokoa.
Ny tsipika fitaratra tsy manam-paharoa ataonay dia natao manokana sy namboarina mba hanodinana ny rivotra mikorontana mivoaka sy lavitra anao sy ny mpandeha anao. Ny korontana ambany dia mitovy amin'ny fampiononana sy kilaometatra maro kokoa.
Raha mikasa mihoatra ny ora vitsivitsy ao amin'ny lasely ianao, dia handoa dividends amin'ny faran'ny andro ny varavarankely.
Fampiononana: FIAROVANA WEATHER!
Tsy mahagaga ny Weather Protectionist fa ny fitaratr'afo izay mamily ny rivotra maina sy misavorovoro dia hampivily ny rivotra mando sy mangatsiaka koa.
Ny orana na ny tara-pahazavana, ny fitaratra eo amin'ny fitaratra dia mahatonga ny toetr'andro ho fiheverana faharoa rehefa mamely ny lalana amin'ny kodiarana roa. Zava-dehibe indrindra izany rehefa 500 kilaometatra ianao na mihoatra - avy any an-trano, ary tsy manam-potoana, vola na rendrarendra mandany andro feno orana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mafana sy mafana ianao.
Ny fampiononana sy ny fahafinaretana no loha laharana foana. Ny fitazonana ny hafanana sy ny maina dia manitatra ny fotoana itondranao anao ary mamela anao handrakotra kilometatra milamina kokoa.
SAFETY: PROTECTION DEBRIS!
Ny fitaratra sy ny foiben'ny IBX dia natao hanomezana fiarovana ny rivotra sy fitomboan'ny fampiononana mitaingina, fa tsy fiarovana raha sendra fifandonana amina fiara hafa, biby na zavatra hafa.
Mitovy amin'izany ihany, mahafaly antsika indrindra ny mahazo taratasy avy amin'ny mpitaingina manamarina ny tanjaky ny fitaratra eo amin'ny fiatraran'ny vorona, ny palama baolina, ary ny diera mihitsy aza!
Tsy mamporisika anao hanana namana iray ianao manipy marmara anao rehefa mitaingina fiara hanaporofoana hevitra iray. Fa raha misy zavatra tsy sariaka tonga eny an-dalana ary tsy manana fitaratra fitaratra ianao dia tena maniry ianao raha manana izany.
Vokatra asongadina - Sitemap Kitapo ho an'ny sekolin'i Kawasaki, Vespa Gts 300 Gtv fitoeran-kitapo, Tongotra môtô fisaka, Pedalin'ny gazy moto, Windshield an'ny Honda Nmax, Vespa Gts Gtv 300 Atraketraky ny kitapo,